एक वर्षको घरभाडा १ डलर !
एजेन्सी काठमाडौं, २ चैत
जर्मनीको अग्सबर्गमा रहेको फुग्गेरी कोलोनीमा पछिल्लो ५ सय वर्षदेखि घरभाडा बढेको छैन । यो क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाले १ वर्षमा १ डलर मात्रै भाडा तिर्छन् । फुग्गेरीको स्थापना सन् १५१४ मा अग्सबर्गका गरिबका लागि बस्न एउटा सोशल हाउजिङ कम्प्लेक्सका रूपमा ज्याकब फुग्गरले गरेका थए ।
को थिए फुग्गर ?
ज्याकब फुग्गर परिवारसँग १४औँ सताब्दीमा जर्मन शहरमा आएका थिए । यहाँ आएर उनले कपडा व्यापार सुरू गरे । १६औँ शताब्दीमा उनको परिवार त्यहाँको सबैभन्दा धनी बनिसकेको थियो । कपडापछि रियल इस्टेट र बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेर उनी सबैभन्दा धनी बने ।
‘ज्याकब फुग्गर द रिच’ नाम दिएका उनी १५१४ मा गरिब र बेसहारा फुगेरेई कोलोनीको निर्माण सुरू गरेका थिए । मानिसले सस्तो भाडादरमा नै बस्ने घर पाउन् भन्ने उनको चाहना थियो ।
यहाँ सिधै आएर बस्न सकिन्न थियो । यहाँ बस्नका लागि क्याथोलिक धर्म मान्ने र आग्सबर्गमा कम्तिमा २ वर्षदेखि बसोबास गरेको हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै, त्यहाँ बस्नेले फुग्गर परिवारका लागि दिनमा तीन पटक चर्चमा प्रार्थना गर्नुपर्दथ्यो । जुन कुरा त्यहाँका मानिसहरू अहिले पनि मान्छन् ।
यहाँ बस्नेले १ डलर भाडा, १ डलर स्थानीय चर्चका लागि र ९५ डलर कोलोनीको मर्मत गर्नका लागि दिनुपर्छ ।
फुग्गेरी कोलोनीका बारेमा थाहा पाएपछि पर्यटकको संख्या ह्वात्तै बढ्यो । त्यसपछि यहाँ प्रवेश गर्नका लागि प्रवेश शुल्क लिन सुरू गरियो । त्यसपछि कोलोनीभित्र एक संग्रहालय पनि बनाइयो । जहाँबाट पर्यटकले यहाँका घरलाई भित्रैबाट अवलोकन गर्न सक्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा फुग्गेरी कोलोनीमा पनि क्षति पुगेको थियो । त्यसपछि यो कोलोनीको पुनः निर्माण र विस्तार पनि गरियो । हाल यहाँ ६७ घर, १४७ अपार्टमेन्ट छन् । जहाँ १४२ जनाको घर छ । यो संसारकै सबैभन्दा पुरानो सामाजिक हाउजिङ कम्प्लेक्स हो ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत २, २०७६, ११:३८:००
मेक्सिकोमा बन्धुकधारीको गोली प्रहारबाट २४ जनाकाे मृत्यु